BAROOR-DIIQ: "Waxa Uu Ahaa Aabbahay, Xataa Maan Macasalaamaynin" - Xiddigihii Waaweynaa Ee Real Madrid Oo Baroor-diiq U Fadhiya - Gool24.Net
BAROOR-DIIQ: “Waxa Uu Ahaa Aabbahay, Xataa Maan Macasalaamaynin” – Xiddigihii Waaweynaa Ee Real Madrid Oo Baroor-diiq U Fadhiya
Saqdii dhexe ee xalay ayuu Real Madrid usoo yeedhay war murugo ku abuuray oo ku wargeliyey in uu caabuqa Coronavirus u geeriyooday Lorenzo Sanz oo Madaxweyne usoo ahaa muddadii u dhaxaysay 1995 iyo 2000, xilligaas oo kooxdu ay ku guuleysatay laba Champions League sannadihii 1998-kii iyo 2000.
Xiddigii reer Croatia ee Predrag Mijatovic oo ka mid ahaa ciyaaryahannadii Real Madrid kula guuleystay Champions League 1998-kii, isla markaana dhaliyey goolkii guusha ee kulankii finalka ay Juventus, ayaa waxa uu sheegay in Lorenzo Sanz uu ahaa aabbihii oo kale, waxaanu xasuustay waayihii quruxda badnaa iyo xusuusaha aan la illoobi karin ee ay kusoo wada qaateen Santiago Bernabeu.
“Wuxuu geeriyooday iyadoo xattaa aanan macasalaamaynin, anigoon awood u helin inaan sagootintii u dambaysay u sameeyo, aad ayay u adag tahay, aadna way u murugo badan tahay” ayuu hadal qiiro leh ku bilaabay Predrag Mijatovic .
“Waa habeenkii noloshayda ugu murugada badnayd, waxa aanu xidhiidhaynay Fernando Sanz maalmihii ugu dambeeyey, waan ogahay in xataa aanay la hadli karaynin, si la mid ah bukaanada kale ee cusbitaalka yaalla.
“Murugada waxay tahay inaanan awoodin inaan booqdo isaga sababtoo ah xanuunka faafaya taas oo mar walba aad uga sii xumaanaysa, walina waan rumaysan kari la’ahay geeridiisa. Waxaan u tixgelin jiray aabbahay oo kale, aadna waan u jeclaa.
“Wuxuu ahaa shaqsi noloshayda aad muhiim ugu ahaa, illaa haddana farriimo ayaanu isku diri jirnay, waanu wada cuntayn jirnay, waananu midaysnayn.
“Nolosha, waxa jira dad raad kaaga taga, Lorenzo na mid ka mid ah ayuu ahaa. Wax walba wuu ii sameeyey, wuu ila soo saxeexday, kaddibna waxa uu isiiyey khibrad badan iyo waxyaabo badan. Aad ayay u murugo badan tahay.”
Predrag Mijatovic waxa kale oo uu xasuustay taariikhihii ay wada sameeyeen, waxaanu yuidhi: “Waxa uu ahaa shaqsi wanaagsan iyo madaxweyne fiican, waxa uu ka mid ahaa kuwii ugu wanaagsanaa taariikhda. Laga soo bilaabo waqtigii uu kooxda i keenay, waxaanu lahayn xidhiidh fiican, xili ciyaareedkii La Septima maaha mid la illoobi karayo.”